Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta IV) | Laga soo bilaabo Linux
Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta IV)
Ugu dambeyntiina, waxa kaliya ee la sugi doonaa waa sida loo diiwaan geliyo isbeddelada isdabajoogga ah ee horumarkeenna.
1 9. Diiwaangelinta isbeddelada
2 10. Dib u eegista taariikhdeena
9. Diiwaangelinta isbeddelada
Waxaan dooneynaa inaan isbedel ku sameyno feyl faylka galka. Marka hore waxaan ku dari doonaa khadka caadiga ah ee bii'ada * nix qoraallada ka dib waxaan u sameyn doonnaa farriin yar oo xamaasad leh. Xaaladdan oo kale waxaan ku sameynaa tifaftiraha qoraalka.
Haddaan amarka wadno xaaladda gadhka Tani waxay noo sheegi doontaa inay jiraan isbeddelo iyo inay tahay inaan cusub sameyno gasho si loo diiwaan geliyo. Marka waxaan fulineynaa:
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "Ku darista fariin xamaasad badan"
Iyadoo xulasho leh -m waxaan maraynaa qoraalka ah gasho oo markaa ma furi doonto tifaftiraha qoraalka, waa hab dhakhso badan oo loo sameeyo a gasho marka isbedelada aysan badneyn macno badana ma sameyneyso in la furo tifaftiraha si uu u sharaxo hal khad.
Markii aan bilownay mashruucii aan ku jirnay Nambarka Google, waxaan dhidibada u aasinay inay yeelaneyso ruqsad GPL v3, waxay sheegaysaa in softiweerka ay tahay in lagu qaybiyo nuqul faylka liisanka. Taasi waa sababta aan ugu xirmi karno goobta of GNU oo soo degso.
Hadda oo aan haysanno feylka liisanka waxaan ku dari karnaa mashruuceenna. Si fudud adoo ku ridaya galka shaqada. Hadaan socodsiino a xaaladda gadhka, waxay noo sheegi doontaa inay jiraan isbeddelo laakiin feylka su'aashu uusan ahayn «raacay»(Hadaad ii ogolaato mudada).
Si isbeddelka loogu muujiyo keydkeena, waa inaan si wax ku ool ah ugu darnaa adoo adeegsanaya amarka tag ku dar.
~ / HelloWorld $ git kudar LICENSE.txt
Haddaan mar labaad tartano xaaladda gadhka Tani waxay noo sheegi doontaa in feyl cusub lagu daray. Ugu dambeyntii waxaan ku ordi a gasho si loo sameeyo nooc cusub ugu dambayntiina waxaan ku shubi karnaa xaaladda hadda jirta ee keydkeena maxalliga ah bakhaarka fog ee lagu marti geliyey Nambarka Google.
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "Ku darista GPL v3 Liisanka liisanka" ~ / HelloWorld $ git push gc master
10. Dib u eegista taariikhdeena
Haddii aan ku xirno keydka mashruuceena ku jira Nambarka Google waxaan ku arki karnaa qaybta source qayb ahaan Isbedelada noocyada kala duwan ee aan u adeegsanay horumarinteena.
Bakhaarka waxaad ka arki kartaa cinwaanka: http://code.google.com/p/lecovi-hello-world/source/browse/
Sida aad arki doonto, waa wax fudud oo waa aalad aad u faa'iido badan. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay, way kuu adeegtay waxaanan sugayaa faallooyinkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta IV)
Waad ku mahadsantahay taxanahan maqaalada xiisaha leh !!
Ma jirtaa sabab gaar ah oo loo adeegsado Google Code halkii laga isticmaali lahaa Github oo umuuqda mid caan ah? Waxaan ka codsanayaa tan ugu weyn jahliga XD
Kaliya maahan inay umuuqatay mid aad ufudud oo fekeraya in dad badan horey uleeyihiin koontada Google, waxaad kuheli kartaa adeega kaliya adoo tagaya goobta Code Google.
GitHub waa aalad aad u fiican, laakiin haysashada xulashooyin badan oo qaabeynta ah mararka qaarkood waxay ka dhigeysaa xoogaa culeys cusub.
Waxaan diyaarinayaa xoogaa qaybo ah oo aan xoogaa kula shaqeynayo GitHub iyo Bitbucket, oo soo bandhigaya Mercurial iyo hg-git.
Ku jawaab lecovi
Kudayasho Linus Torvalds: Ka abuur xoqitaanka (IV) nidaamkaaga hawlgalka adiga kuu gaar ah
Gyazo, barnaamijka lagu soo qaado shaashadda oo si toos ah loogu dhejiyo shabakadda